မျိုးသန့်ထွန်း(စစ်ကိုင်း) - "အလွင့်တွေထဲမှာ ငါတစ်ယောက်တည်း" - MoeMaKa Media
Home / Community / J Maung Maung / Myo Thant Tun (Sagaing) / Profile / မျိုးသန့်ထွန်း(စစ်ကိုင်း) - "အလွင့်တွေထဲမှာ ငါတစ်ယောက်တည်း"
Community, J Maung Maung, Myo Thant Tun (Sagaing), Profile
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၂၀
တစ်ခါတစ်လေ မြို့အထဲ မှာ ရိူးဝါရာဘာ ဖိနပ်ကိုစီးပြီ လမ်းလျှောက်နေမယ်။ Levi’s ဂျင်းဘောင်းဘီ ကိုအမြဲဝတ်တတ်တ ယ်။ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ ခေါင်း ငိုက်စိုက်စိုက် လမ်းလျှောက်နေသော သူ တစ်ယောက်ကို တွေ့ရမယ်။ ကြုံရင်ကြုံသလိုလမ်းဘေး ထမင်းဆိုင်မှာ ဝါးတီးဆွဲ တတ်တယ်။ ဘာပကာသန မှမရှိ တဲ့သူ ။ထို သူဟာ တေးရေး-တေးဆို ဂျေမောင်မောင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့မမေ့နိုင်တဲ့ တေးမှတ်တိုင်က "အချစ်ရေ...."စီးရီး (၁၉၈၂-၈၃) နဲ့ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းက " အချစ်ရေ့...နေလိုမှကောင်းရဲလား.."."လူတိုင်နှုတ်ဖျာမှာစွဲခဲ့ကြ တာ ပေါ့။ ကြီးမှ ဝက်သက်ပေါက်ရင် သီချင်းဟာလည်း လူကြီးလူငယ်ကြားမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တယ်။"အချစ်ရေ့.."နဲ့အတူ မန္တလေးကThe Shells အဖွဲ့(ခရုလေးများ)ကို လူသိများခဲ့တယ်။The Shells အဖွဲ့ကို ၁၉၇၈ လောက်က မန္တလေးမှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ခရုလေးများအဖွဲ့ရဲ့ ပေါက်ဖွားသူများဟာ ဂီတအပြင်းစားပိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုရှဲ၊ တီတောက်၊ ခင်မောင်အေး၊ စိန်သန်း၊ ခင်မောင်ကြည်၊ Jerry-ဂျယ်ရီ၊ လင်းဘက်နဲ့ သော်ဇင်တို့ပါပဲ၊ The Shells အဖွဲ့ဦးဆောင်သူ ကိုကျော်ဝင်း(ခ) ကိုရှဲလ်ပါ၊ စီမံသူက ဂျယ်ရီနဲ့ ဂျေမောင်မောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဂျေ ကို လူငယ် လူကြီး တေးချစ်ပရိတ်များက ချစ်ခင်ရင်းနှီးကြပါတယ်။ လမ်းမှာတွေ့ရင် သိလိုဖြစ်စေ၊ မသိလို့ဖြစ်စေ ကိုဂျေ!ကိုဂျေကြီး! လို့ လှမ်းနှုတ်ဆက်ရင် င် သူကလက်ကလေးထောင်ပြကာ ပြန်နှုတ်ဆက်တတ်ပါတယ်။ ခင်မင်လေးစားဖို့ကောင်းပါ တယ်။
ကိုဂျေ ကို ကျွန်တော် ခိုင်ထူးနဲ့ပတ်သက်၍ ခင်မင်ရင်းနှီခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်ထူးက ဂျေမောင်မောင် ကိုတွေ့ရင် "ကိုမောင်" လို့ခေါ်တယ်။ ဂျေမောင်မောင်က ခိုင်ထူးကို "ထူးကြီး"တဲ့။ ဘာလို့ ထူးကြီးလည်းမသိ။ "ထူးခြားနေ"လို့ဖြစ်မယ်။ သူတို့ဟာ ညီအစ်ကိုလိုရင်းနှီး ပြီး ပြောမနာဆိုမနာ နေလာခဲ့ကြတယ်။ ခိုင်ထူးဆိုတဲ့ သီချင်း များကို ဂျေမောင်မောင်ရေးပေးခဲ့ တဲ့သီချင်းတွေများ ပါတယ်။ သူရေးတဲ့သီချင်းတွေက ဘဝနဲ့ရင်းနှီးမှုတွေက ရလာခဲ့ပါတယ်။
ကိုဂျေ ရေးတဲ့သီချင်းတွေအကြောင်းမေးချင်တယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ကိုဂျေမောင်မောင်ကို.. ကိုဂျေလို့ခေါ်တဲ့အခါရှိတယ် ကိုမောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုဂျေနဲ့ ဖုန်းဆက်စကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြ တယ်။ ကိုဂျေရေးတဲ့သီချင်းတွေ အကြောင်း မေးတတ်တယ်။ သူ့သီချင်းတွေကို လူအများကကြိုက်ကြတယ်။ ရိုးရှင်းတယ်။အချစ်ကို ရိုးရိုးပဲစဥ်းစားပြီး ရေးဖွဲ့လေ့ရှိတယ်။
ကိုဂျေကို တွေ့ချင်နေတာကြာပါပြီ။တစ်နေ့မှာ ကိုညီ (ခိုင်ထူးရဲ့ငယ်သူချင်လည်းဖြစ်။ The Phoenix Band မှာ Bass Guitarist "သီချင်း တစ်ပုဒ်ပန်း တစ်ဆုပ်" "အဉ္စလီ"စီးရီးတုန်းက bass တီးသူ) က လှမ်းဖုန်းတယ်။ကိုမောင်သူဆီလာမယ်တဲ့ အားရင်ထွက်လာခဲ့ပေါ့ သူ့အိမ်မှာဆုံကြမယ်တဲ့။ Ok! ဒါနဲ့ လွယ်အိတ်လွယ်ကာ ကိုညီ ရဲ့ လှည်းတန်းက ကိုညီရဲ့ အိမ်ဆီကိုအ ရောက်လှမ်းလာ ခဲ့တယ်။
ဟိုရောက်တော့ ကိုညီနှင့်ကိုဂျေတို့ သီချင်းနားထောင်နေကြတယ်။ ကိုဂျေ ရဲ့သွေးသားတွေအထဲမှာ Music တွေစီးမျောနေပါတယ်။ ကိုဂျေဟာ Levi’s Jeans ဘောင်းဘီးအပြာရောင်ကိုဝတ်လို့ TV ကလာတဲ့အဂ်လိပ်သီချင်းများကိုနားစွင့်ကာ ကျွန်တော်ကို လှမ်းလက်ပြနူတ်ဆက်နေလေရဲ့။ သူကိုကြည့်ရတာ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အလား ထင်ရပါတယ်။ ကိုညီရဲ့အိမ်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ သီချင်းတွေနားထောင်းကြ၊ စကားတွေပြောကြနဲ့ ကိုဗစ်ကာလကို ​ခေတ္တခဏ မေ့ပျောက်ထားလိုပါပဲ။
နောက်တစ်ခါ ကို ညီ အိမ်မှာ ထမင်းနဲ့ဟင်း(အိမ်ချက်လေး)ကို ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် (ကိုညီ၊ ကိုဂျေမောင်မောင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့) ဟာ မြိန်ရေရှက်ရေ ဝါးတီးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ထမင်းစားရင်းနဲ့အာလာပ သလာပ ပြောကြတာပေါ့။ ထိုနေ့က ၃၁ သြဂုတ်လ ၂၀၂၀ နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သုံးယောက်ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။
အမှတ်တရ နေ့လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ကိုညီ (ပါမောက္ခဦးသိန်းမောင်-သားပါ) ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကိုဂျေရဲ့ "ကာရံမဲ့ ခင်မှု"(၁၉၇၈-၇၉) စီးရီးကို အဲဒီ တုန်းက ကိုညီတို့ ကိုစိုးဝင်း (မန္တလေးနေတယ်၊ ပါမောက္ခဦးချမ်းမြရဲ့သားပါ) တို့က တီးခတ်ပေးထားတာလို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကိုဂျေကြီးနဲ့ မန္တလေးမှာက ဂီတ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ကိုဂျေမောင်မောင် နဲ့ကိုခိုင်ထူးတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူမှာ ကိုစိုးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုစိုးဝင်းနဲ့ကိုခိုင်ထူးတို့ဟာ အဖေ ပါမောက္ခတွေဖြစ်ကြလို့ ဟိုတုန်းအထဲက သူငယ်ချင်းတွေပါ။ အဲဒီအချိန်က ခိုင်ထူးရဲ့ "ဆို" စီးရီးမသွင်းသေးပါဘူး။
ပထမတော့ ကိုဂျေကို မေးမိတယ်။ ဂျေ(J)မောင်မောင် ဖြတ်သန်းမှု.(ဂျေမောင်မောင်..ဖြစ်တည်မှုလေ။ J မောင်မောင်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲပေါ့..).."
ဒီလိုဗျ!...ကိုယ်ဘဝက ရုန်းရကန်းရတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဘဝအတွက် အလုပ်လုပ်ရတယ် ။ မိုးကုတ်မှာ ကျောက်တူးသမားဘဝ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲမှာ ကျောက်တူးရတဲ့ဘဝ၊ အခက်အခဲမှုရှိတာပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျောက်တူးရင်း အကြမ်းပတမ်းခံနိုင်အောင် Levi’s ..ဂျင်းဘောင်းဘီ နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ ရာသီဥတုအေးတာလည်း ပါပါတယ်။Jeans ဂျ င်းဘောင်းဘီ နဲ့ ဂျင်းJacketအမြဲဝတ်တယ်။ ကျွန်တော်က ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်။ စွဲစွဲမြဲမြဲဝတ်တာပေါ့။ ရွံ့တွေဗွက်တွေအထဲမှာ လုပ်ရတော့ ဒီဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ရုန်းရကန်းရ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပျော်တယ်။ အမြဲဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ နေတယ် ၊ ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်။ ကြာလာတော့ ကျွန်တော်ကို ..ဂျင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက် ဝတ်လိုက်နေလာတော့ သူငယ်ချင်း လူးဝစ် ကခေါ်တယ် Jeans မောင်မောင် လို့ခေါ်တယ် ။ ဒီနောက်သူငယ်ချင်းတွေက Jeans မောင်မောင် ခေါ်ရင်နဲ့ နောက် တော့" ဂျေမောင်မောင် "ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ မိုးကုတ်မြို့မှာ လူငယ်တီးဝိုင်းလေးရှိတယ် ။ တီးဝိုင်းနာမည်က ရာဇာ တီးဝိုင်း တဲ့။ အဲဒီတီးဝိုင်းမှာ ဂျေမောင်မောင် က သီချင်းဆိုဖြစ်တယ်။ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် တို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်လည်း ပွဲရှိရင် ရာဇာတီးဝိုင်းနဲ့ သီချင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်း ကိုဂျေကပြောပါတယ်။
ဂျေမောင်မောင်ရဲ့ အမည်ရင်းက အောင်ခိုင်မြင့်ပါ။ ဦးခင်မောင်အုန်းနှင့် ဒေါ်လှလှမူ တို့က ၁၂-၈-၁၉၅၁ ၊ ဝါးခယ်မမြို့မှာမွေးဖွားတယ်။ မန္တလေးဟာ သူရဲ့" ဒုတိယမိခင်မြေ" လို့ပြောပါတယ်။
"ကိုယ်ခံစားရသမျှ ရေးထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို....." ၈၃လမ်း၊ ၂၅/၂၆ ဘီလမ်းကြား သီချင်းဟာ ခိုင်ထူးဆိုခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်က သူဟာ မန္တလေးက ၈၃လမ်း၊၂၅/၂၆ Bလမ်းကြား 7777(၇လေးလုံး) မုန့်တိုက်မှာရှိနေခဲ့တယ်။ ထိုအတိုက် အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ နေပူပူ မိုးရွာရွာ သီချင်းတွေဖန်တီးနေခဲ့တယ်။ သူ့သီချင်းစာသားဖြစ်တဲ့ ခိုင်ထူးဆိုသော "၈၃-လမ်း၊၂၅/၂၆ဘီလမ်းကြား" ဟာ မန္တလေးမြို့ပြတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖွဲ့ဆိုဖူးပါတယ်။ ထိုစာသားအချို့"ပူလောင်ပြင်းတဲ့ မန္တလေးရဲ့ ချစ်ချစ်တောက်နွေဟာ ရင်ကို အေးမြမှုနဲ့ ပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်"လို့ မန္တလေးရဲ့နွေရာသီကို ခံစားပြီ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုဂျေက ပြောပါတယ်။ အပှုတွေ ဘယ်လောက်ပှုပြင်းပါစေ သူခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့် ရန်ကုန်ရဲ့အပူဟာ သူအတွက်အေးဆေးပဲလို့ သူခံစားရပါတယ်။
ခိုင်ထူး ဆိုတဲ့ "ဆို"သီချင်းအကြောင်းလေးပြောပြပါတယ်။
"ဆို" သီချင်းကရေးထားတာကြာခဲ့ပြီဒါပေမယ့် သီချင်းကမပြီးသေးဘူး။ နောက်ဆုံးပုဒ်က ကျန်နေသေးတယ်။ ကိုခိုင်ထူးက ဒီသီချင်း(ဆို)ကို ယူသွားတော့ ...Recording...မှာ သွင်းမယ်လုပ်တော့...."ကိုထူးကပြောတယ် ကိုမောင်လုပ်ပါအုံး..သီချင်းကမပြီသေးဘူး "..ဒါနဲ့ ကိုမောင်စဥ်းစားတယ်....ကောရပ်အပိုဒ်ကလည်းမပြီဘူး ဆိုတော့ သူစဥ်းစာတယ်...အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုကလာတဲ့သီချင်း( အမြဲလွှင့်ပေး) ဆိုတဲ့သူတော့ မေ့နေတယ်။ ထိုသီချင်းက"ခဏ..ခဏ...မကြာ မကြာ ပြောဖူးပါတယ်.....မောင့်ကိုသာ ချစ်ဆုံးပါကွယ်...အသည်လှိုက် အူလှုိက်... မ မှာသုံးတယ် အခုလည်းပြောရအုံးမယ်..နောင်ကိုလည်းပြောရဦးမယ်.." မြန်မာတေး သီချင်းအထဲက(ထိုရေဒီယိုတေးသီချင်းက သီတာသိမ့် ဆိုသလာပဲ)... "ခဏ..ခဏ ပြောတဲ့.." ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရလာတော့ သူ့ပျော်သွားတယ်။ ကိုခိုင်ထူး ရပြီ..ဆိုပြီး....မင်းရဲ့ဘဝမှာ ရှိမှ ဖြစ်မယ် ၊ မင်းရဲ့ပါးစပ်က ခဏ ..ခဏ ပြောတယ် ...မင်း သိပ်ချစ်တယ် မင်းသိပ်ချစ်တယ်...ဆို....ဆို....ဆို..."လို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ "ဆို"သံ စဥ်ကတော့ အစောစောအပိုင်းက (မိုးကုတ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း) ရလာခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။
ဒီနောက် "အချစ်မိုး" သီချင်းအကြောင်း မေးမိတယ်။ "အချစ်မိုး" သီချင်းကို ဂျေမောင်မောင်က ရေးထားတာကြာပါပြီ။ အဲဒီသီချင်းကိုလည်း ကိုခိုင်ထူးက သူ့ဆိုမယ်ဆိုပြီး ယူသွားပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုခိုင်ထူးလည်း မဆိုဖြစ်ဖူးနဲ့တူတယ်။ ကိုခိုင်ထူးဆီကနေ ကျွန်တော့်ညီ (ကိုဂျေညီညီ) စီးရီးသွင်းမယ်လုပ်တော့ သီချင်းလိုနေတာနဲ့ ယူ ဆိုလိုက်ရတယ်။ ကိုခိုင်ထူးက လိုလိုလားလား ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ"အချစ်မိုး"..".အချစ်မိုး ဘယ်တော့ရွာမှာလဲ..."ဆိုလို့ ကိုဂျေညီညီဟာ အဲဒီခွေနဲ့ စတင် ပေါက်သွားပါတော့တယ်လို့ ကိုဂျေ ပြောပြလို့သိရပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ကိုဂျေကို မေးဖြစ်တာက "ကာရံမဲ့ ခင်မင်မှု" တေးစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲစီးရီးက ၁၉၇၇-၇၈ လောက်ကဖြစ်မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ စုပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ စီးရီးပါ။ စောပါတယ် The Shells အဖွဲ့ထူထောင်ဖွဲ့စည်းခါစဖြစ်မယ်။ ၁၉၇၈-၇၉ ခုက "ကာရံမဲ့ခင်မင်" ကို ဆလိုင်း ကိုသွှအောင် ရေးပေးတာပါ။ အဲဒီ စီးရီးမှာ တေးဆိုများက ..မောင်မောင်(ဂျေမောင်မောင် လို့ မတတ်ထားတာ တွေ့ရ)၊ စန္ဒီကျော်ဒင်(နောင်တွင် ကိုဂျေ ရဲ့ဇနီးဖြစ်လာသူ)၊ တင်ဝင်း( တေးရေး-တင်ဝင်း(ဆေး/မန်း))၊ ဂျယ်ရီ(Jerry)တို့ ၄-ယောက်ပဲ သီဆိုပါတယ်။ နောက်တေးရေးဆရာများ က ..စိုင်းခမ်းလိတ်၊ သွှအောင်( တေးရေး၊တေးဆို- ဆလိုင်းသွှအောင်)၊ မောင်သစ်မင်း၊ ကိုနေဝင်းနဲ့ မောင်မောင်(ရေး၊ဆို- ဂျေမောင်မောင်)တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ "ကာရံမဲ့ခင်မင်မှု"စီးရီးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို Online ကဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီ"ကာရံမဲ့..."စီးရီးဟာ ခိုင်ထူးရဲ့ ပထမဆုံးအခွေ ခိုင်ထူး၊ ရီဇော် တို့ "တေးမြုံဌက်" ခွေ (စီးရီး) ထက် (၆)လစောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ "တေးမြုံဌက်"က ၁၉၇၉ခု မေလ ၊ "ကာရံမဲ့ခင်မင်မှု"က ၁၉၇၈ နှစ်ကုန် (ဒီဇင်လာလ) လောက်ကထွတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်က ကိုဂျေမောင်မောင် ကို ဖုန်းဆက်မေးကြည့်တော့ ကိုဂျေ က "ကိုခိုင်ထူးက စောမယ် ထင်တယ်"လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ အဆိုတော် လီလီနိုင်စိုးရဲ့ "ရာသီဥတုကောင်းပါတယ်" စီးရီးခွေမှာ Jeans မောင်မောင် အမည်နဲ့ ကော်ပီသီချင်းတွေ ပထဆုံး ရေးခဲ့တယ်လို့ ထပ်မံသိရပါတယ်။ နောက်အပိုင်းမှာ ကိုဂျေဟာ ရန်ကုန်ရောက်လာပြီး YMCA မှာ အစဥ်အမြဲ နေထိုင်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုဂျေ ကို YMCA မှာ ဘယ်လောက်က နေထိုင်လာခဲ့သလဲလို့ မေးကြည့်တော့ သူက "ကြာပြီ...ကြာခဲ့ပြီး.."လို့ပဲပြောပါတယ်။
ကိုဂျေမောင်မောင် ဟာ နောက်အပိုင်းမှာ တစ်ကိုယ်တော် စီးရီးရော့..အတွဲခွေများရော့ တော်တော်များများထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစီးရီးတွေအထဲက မှတ်မိ သလောက်(အတိကျမဟုတ်) "အချစ်ရေ့..(၁)+(၂) (၁၉၈၃)၊ ဖြေရှင်းခွင့်(၁၉၈၇)၊ အတွဲခွေ.."လမ်းပေါ်မှာ အသည်းမခွဲပါနဲ့"(၁၉၉၀)၊ "အားလုံးကောင်းသွားမှာပါ" တေးစု(၁၉၈ရ-၈၈)၊ "လျှပ်စစ်မိုးကောင်း"(၁)+(၂)တွဲ (၁၉၉၀( သို့)၉၂-၉၃လား?)။ "အချစ်စက်ဝိုင်း"တွဲခွေ ရုပ်ရှင်သီချင်းများ၊ "မကြည့်ရက်တော့ဘူးကွယ်"တွဲ- မီမီဝင်းဖေနဲ့၊ The Shells-" အသည်းနှလုံး"၊ ဘိုတောက်ရဲ့ "လမ်းဖြောင့်" ခွေ(၁၉၉၄) တို့အပြင် နောက်ထပ်နောက်ထပ် ကို ဂျေမောင်မောင်းရဲ့စီးရီးခွေများ ကျန်ရစ်ကောင်ကျန်နေပါမယ်။အချို့ခွေထုတ်ခုနှစ်များကို Fb လူမှုကွန်ယက်ကရရှိပါ၍အမှားရှိနိုင်ပါတယ်။
အခုအခါ ကိုဂျေမောင်မောင်ဟာ "မယုံလို့လား" စီးရီး Audio CD ကို ၂၀-၂-၂၀၂၀ နေ့က ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တေးရေးများက စိုင်းထီးဆိုင်၊တင်ဝင်း(ဆေး/မန်း)၊စနေကျော်၊နဲ့ ဂျေမောင်မောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ"မယုံလို့လား" စီးရီး CD ကို Ko Nyi နဲ့တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ကြတာလို့သိရပါတယ်။ထို စီးရီး ဟာ ကို ဂျေမောင်မောင်ရဲ့ နောက်အပိုင်း ဂီတမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါ။ ပေါက်တန်သလောက်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဂျေရဲ့အမာခံပရိတ်သတ်က ရှိနေဆဲပါ။ နောက်ထပ်လည်း စီးရီး တစ်ခုလုပ်နေတယ်လိုသိရပါတယ်။
ကိုဂျေမောင်မောင်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး ဂီတသူငယ်များဟာ လူလောကကြီးထဲက တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ထွတ်ခွာ(လစ်သွားကြ) သွားသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ထီး လို့ခေါ် စိုင်းထီးဆိုင်၊ ကိုတိုးကြီး ခေါ် ခင်မောင်တိုး၊ ကိုထူး လို့ခေါ့်တဲ့ ခိုင်ထူး ၊ ကိုခင်ဝမ်း၊ ကိုရဲလွင်၊ ကိုသာထွေး ..စတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ကိုဂျေ ဟာ တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုဂျေမောင်မောင်ဟာ သူ့သူငယ်ချင်းများကို သူ့ရင်အထဲ အသည်းအထဲကပဲလွမ်း" ပါမယ်တဲ့။ ရှေ့ဆက် ဘဝခရီးမှာလည်း သူဟာ သူ့ဂီတနဲ့ ဂီတပရိတ်သတ်ကြီးကို ရိုးရိုးသာသာ ပေးဆပ်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ တစ်ယောက်တည်း ဂီတခရီးကို ဆက်လွှင့်ရအုံးမည်.....
​ကို J မောင်မောင်....Y(YMCA) နေပြီး ... ကျ န်းမာပါစေ! အသက်ရှည်ပါစေ! ဂီတအလုပ်လုပ်နိုင်ပါစေ!... ”Good Luck Ko J” ဆုတောင်းလိုက်တယ်။...
(မှတ်ချက် - တေးရေး-တိုနီတင် ရေး၊ ခိုင်ထူး - ဆိုတဲ့သီချင်း." အလွင့်တွေထဲမှာ ငါတစ်ယောက်တည်း" ကို ခေါင်းစီးယူသုံးပါတယ်)
မျိုးသန့်ထွန်း(စစ်ကိုင်း) - "အလွင့်တွေထဲမှာ ငါတစ်ယောက်တည်း" Reviewed by MoeMaKa on 12:32 PM Rating: 5